Samsung Galaxy Tab S6: ny bateria dia ho kely noho ny an'ny S4 | Androidsis
Miseho tsikelikely izy ireo antsipiriany vaovao momba ny takelaka lafo vidy manaraka avy amin'ny mpamokatra Koreana. Omaly dia efa nasehonay anao ny pitsopitsony rehetra momba ny famolavolana sy ny Fitaovana Samsung Galaxy Tab S6, ny sainam-pirenena manaraka an'ny fianakavian'ny Tab mpamorona ao Seoul, ary izao dia fantatray ny antsipiriany bebe kokoa.
Ary io, tamin'ny alàlan'ny maso ivoho fanamarinana any Taiwan, dia afaka nahafantatra ny fahaizan'ny bateria an'ny Samsung Galaxy Tab S6 izahay, ary amin'ny zavatra hitantsika dia ho ambany lavitra noho ny teo alohany, ny Samsung Galaxy Tab S4 .
Ny batterie an'ny Samsung Galaxy Tab S6 dia ho 6.840 mAh
Tokony ho tsaroana fa, eo amin'ireo toetra mampiavaka ny Samsung Galaxy Tab S6, dia misongadina ny efijeriny 10.5-inch izay hahatratra ny vahaolana QHD, ankoatry ny 6 GB RAM sy processeur Snapdragon 855, ny firavaka amin'ny satro-boninahitry ny Mpanamboatra amerikana manao ny takelaka vaovao an'ny orinasa no tsara indrindra eny an-tsena.
Mbola misy antony hafa koa hahagaga ny bateria voafetra ananan'ny Samsung Galaxy Tab S6: 6.840 Mah. Raha heverintsika fa ny maodely teo aloha dia nanana bateria 7.300 mAh, hafahafa ny orinasa fa nisafidy fahaiza-manao voafetra toy izany. Mazava ho azy fa ny famolavolana ny terminal dia misy ifandraisany betsaka amin'izany, satria ny filokana ho an'ny fijery izay manify araka izay azo atao dia misy vidiny.
Fa hanana ve ianao Batterie Samsung Galaxy Tab S6? Azo inoana fa tsia. Ary tokony ho tsaroana fa ny processeur Snapcagon 855 an'ny Qualcomm dia manana dingam-pamokarana izay manome antoka ny fahombiazan'ny angovo betsaka kokoa, mba hahafahantsika miala sasatra mora amin'izany. Ary toy izany koa no hitranga amin'ny efijery misy azy, azo inoana fa tontonana AMOLED, izay hamela io fidinana io amin'ny fahaizan'ny bateria amin'ity takelaka ity, tsy hisy fiantraikany be loatra amin'ny fizakantena farany.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy miandry ny fampisehoana ofisialy ny Samsung Galaxy Tab S6 isika, izay azo antoka fa haseho eo akaikin'ny Samsung Galaxy Note 10, hijerena izay tsy ampoizina ataonay ny mpanamboatra Koreana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny batterie an'ny Samsung Galaxy Tab S6 dia tsy ho ny suit anao matanjaka tsara
Ahoana ny fomba hanovana ny sarinao ho tantara an-tsary